IXiaomi Mi MIX 4 iya kuphehlelelwa oku kuwa | I-Androidsis
IXiaomi Mi Mix 4 iya kuphehlelelwa oku kuwa kwintengiso
UXiaomi usishiya kulo nyaka notshintsho kumanqanaba eefowuni, emva kokuba ezisusile ezinye zazo. Nangona uphawu lwaseTshayina luzokwazisa kungekudalaIsizukulwana sesine seMi MIX yakho. Ekwindla kunyaka ophelileyo imodeli yesithathu yaziswa kwaye kulo nyaka i-5G inguqulelo ifikile, ifowuni yokuqala yolu hlobo kunye nale nkxaso. Isizukulwana sesine siyaqhubeka.
Kwakukho intelekelelo nge ukumiliselwa kweXiaomi Mi MIX 4. Kuba uninzi luchaze ukuba le modeli yayiza kumiliselwa ngo-Agasti walo nyaka. Kodwa ukusuka kwinkampani sele beyicacisile into yokuba akunjalo, kodwa singalindela ukuba iphehlelelwe ekwindla yalo nyaka. Kuya kufuneka ulinde ithutyana.
Kuqikelelwa ukuba le Xiaomi Mi MIX 4 intsha iza kuphehlelelwa phakathi kukaSeptemba ukuya ku-Okthobha kwintengiso. Banokukhetha amaxesha afana nonyaka ophelileyo. Kwi-2018 ifowuni yafika ngo-Okthobha, ke mhlawumbi iyinto efanayo malunga noku. I-brand ihlala isebenzisa imihla efanayo.
Yintoni esinokuyilindela kwesi sizukulwana sitsha akukaziwa nto okwangoku. Inkampani ayithethanga nto malunga nomnxeba kwaye akukho kuvuza kuyinyani okanye kunokuthenjwa okusinika imikhondo malunga nalo. Ke kufuneka silinde ithutyana de le fowuni yenziwa yaseburhulumenteni.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba iimodeli zoluhlu lweXiaomi Mi MIX ziqalisiwe ngaphakathi kuluhlu oluphezulu. Kusenokwenzeka ukuba kunjalo fika kunye ne-Snapdragon 855 njengangaphambili. Kodwa ayisiyiyo into eqinisekisiweyo ngalo mzuzu, okanye isenokuba yeyona nguqulelo iphambili kuyo. Ke siyathemba ukwazi okungakumbi ngale fowuni ivela kuhlobo lwesiTshayina.
Siza kuzimamela iindaba malunga neXiaomi Mi MIX 4 Uhlobo lwesiTshayina. Ekwindla kuya kuthi ekugqibeleni kube semthethweni, ke ubuncinci iinyanga ezimbalwa zokuba silinde de sibe siyazi ngokusemthethweni. Ifowuni ebizwa ukuba ithengise kakuhle kwaye iya kuthi igqibezele isiphelo esiphezulu sophawu ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi Mix 4 iya kuphehlelelwa oku kuwa kwintengiso
IGolden Fold sele ifumene iimvavanyo ezongezelelweyo zokunyamezela
I-Alchemy Wars yi-RTS endala eyokugcwalisa umngxunya ongenanto kwi-Android